May, 2020 | 9han News
နဲနဲလေးအေးလိုကျတာနဲ့ တဆဈဆဈကိုကျနတေဲ့ ခါးနာဝဒေနာကို ပြောကျကငျးစတေဲ့နညျး
နဲနဲလေးအေးလိုက်တာနဲ့ တစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်နေတဲ့ ခါးနာဝေဒနာကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း ခါးနာဝေဒနာကို ခံစားနေရပါသလား..? နဲနဲလေးအအေးခံလိုက်တာနဲ့ အရိုးအဆစ်မြစ်တွေ တစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေပါသလား..? အခုဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းလေးကို သုံးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ဒီဝေဒနာတွေအားလုံး ယူပစ်သလို ကင်းစင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ခါးနာ၊ အရိုးအဆစ်တွေ ကိုက်တတ်လို့ ဆရာဝန်သွားပြရင် ဆရာဝန်တွေ အားလုံးက ဒီပြဿနာဟာ အနေအထိုင် ကိုယ်နေဟန်ထား မမှန်ကန်လို့ ဖြစ်တာ၊ Advertisements
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ဇာတ်မင်းသမီးလေးကိုပါးတွေ နားတွေရိုက်တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေ ပေးတာကြောင့် ဆိုပြီး LGBTမလေးကို မတရားတွေထိုးကြိတ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် Vedio Fileအောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည် Advertisements ဇာတ်မင်းသားစွမ်းဇာနည် မတရားထိုးကြိတ်နေတာဗျာ။ဟိုနေ့ကဇာတ်မင်းသမီးလေးကိုပါးတွေနားတွေရိုက်တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေပေးတာသူဆိုပီး LGBTမလေးကိုမတရားတွေထိုးကြိတ်နေတာဗျာ… အဲသတင်းကသူပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး Advertisements မင်းသမီးအကောင့်ကိုဝင်ကြည့်ရင်းနဲ့သိတာပါကွာ…ကိုယ်ကလည်း မဟုတ်တာလုပ်ထားသေး မဆိုင်တဲ့သူတွေကို ပတ်ရမ်းတာတော့များသွားပြီကွာ… Credit-HNO ############################################################### #Unicodeဖွငျ့ဖတျရနျ ဇာတျမငျးသမီးလေးကိုပါးတှေ နားတှရေိုကျတဲ့ သတငျးဓာတျပုံတှေ
အိန်ဒိယတှငျ ကိုဗဈလူနာမြား၏ သှေးနမူနာကို မြောကျအုပျစုက တိုကျခိုကျ ယူဆောငျသှား
အိန်ဒိယတှငျ ကိုဗဈလူနာမြား၏ သှေးနမူနာကို မြောကျအုပျစုက တိုကျခိုကျ ယူဆောငျသှား… အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျ ဆေးဘကျဆိုငျရာ တာဝနျရှိသူ တဈဦးကို မြောကျမြားက တိုကျခိုကျပွီး ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါရှိသူမြား၏ သှေးနမူနာမြားကို ယူဆောငျသှားကွောငျး အာဏာပိုငျမြားက မေ ၂၉ ရကျတှငျ ပွောကွားသညျ။ ယငျးသို့ သှေးနမူနာမြားကို တိုကျခိုကျ ယူဆောငျသှားခွငျးသညျ ဥတာပရာဒကျပွညျနယျ မွို့တျော လတျချနောငျးမွို့၏
လကျဆောငျပေးတယျဆိုတာ အမှတျတရတဈခု တညျဆောကျတာ ဖွဈသလို အလေးထားကွောငျး ဖျောပွလိုကျတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ သငျပေးတဲ့ လကျဆောငျဟာ အမွဲလိုလို အမှတျတရ ဖွဈစပွေီး သငျ့အ‌လေးထားမှုကို မွငျသာစဖေို့ လိုပါတယျ။ နာရီတဈလုံးဟာ အမှတျတရနဲ့ အလေးအနကျထားမှုကို ဖျောပွနိုငျတဲ့ လကျဆောငျဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အခုပွောမယျ့ အခကျြတှကွေောငျ့ နာရီတဈလုံးဟာ အကောငျးဆုံး လကျဆောငျ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ (၁)
မွနျမာကွကျတောငျ အားကစားမယျ သကျထားသူဇာ ကွိုးပမျးနသေညျ့ အိုလံပဈဝငျခှငျ့အတှကျ သတျမှတျခကျြမြား ထုတျပွနျ
မေ ၂၉ မွနျမာကွကျတောငျအားကစားမယျ သကျထားသူဇာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခှငျ့ရရနျ ကွိုးပမျးနသေညျ့ တိုကြိုအိုလံပဈ ပွိုငျပှဲဝငျခှငျ့အတှကျ သတျမှတျခကျြမြားကို ကမ်ဘာ့ကွကျတောငျအဖှဲ့ခြုပျက ထုတျပွနျလိုကျပွီဖွဈသညျ။ ကမ်ဘာ့နိုငျငံမြားတှငျ ဖွဈပှားနသေညျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ကွကျတောငျပွိုငျပှဲမြားကို မတျလကတညျးက ရပျနားခဲ့ရပွီး ဂပြနျနိုငျငံက အိမျရှငျအဖွဈကငျြးပမညျ့ အိုလံပဈပွိုငျပှဲကိုလညျး ၂၀၂၁ ခုနှဈသို့ ရှဆေို့ငျးခဲ့ရသောကွောငျ့ အိုလံပဈဝငျခှငျ့အတှကျ သတျမှတျခကျြမြားကို ကမ်ဘာ့ကွကျတောငျအဖှဲ့ခြုပျက ပွနျလညျသတျမှတျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ကမ်ဘာ့ကွကျတောငျအဖှဲ့ခြုပျသညျ အိုလံပဈဝငျခှငျ့အတှကျ
သိပျခဈြရတဲ့ မမက ထားသှားလို့ ကွိုးဆှဲခသြှားတာတဲ့
(၂၉.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊(၀၆:၁၃)အချိန်ခန့် ရပ်ကွက်(၁၂)၊နယ်မြ(၅)၊နယ်စည်းမထားဆရာဝန်များရုံးအရှေ့၊ပိတောက်ပင်ပေါ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးကြိုးဆွဲချ သေဆုံးနေပါသဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါရန် ကျောက်မဲမြို့နေ ကိုနေဖြိုးမြင့်(တာချီလိတ်နယူးအေဂျင်စီ)မှ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားလာပါသည်။ Advertisements အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် လားရှိုးမြို့နယ်မြေရဲစခန်း၊တာဝန်းမှူး-ဒုရဲအုပ်လှခင်ဦးစီးသည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ရပ်ကွက်(၁၂)အုပ်ချုပ်ရေးမှူး-ဦးဘလှတင်၊ရပ်ကွက်(၁၂)ရဲကင်းမှတပ်ကြပ်မောင်မောင်သောင်းနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ကရုဏာရှင်လူမှုကူညီရေးအသင်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ သေဆုံးသူ-အမည်၊နေရပ်မသိရှိရသည့်အမျိုးသားတစ်ဦးအား သစ်ပင်ပေါ်မှ ခက်ခက်ခဲခဲဖြုတ်ယူကာ လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး-အရေးပေါ်ဌာနသို့၊ထိုမှတစ်ဆင့်လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး-ရင်ခွဲရုံသို့(PR-003)ဖြင့် ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ Advertisements သေဆုံးသူမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုမှ လက်ဖက်ရည်အဖျော်ဆရာတစ်ဦးဟုသိရှိရပီး အမည်၊နေရပ်လိပ်စာ မသိရှိရသေးပါ။သေဆုံးသူအား သိရှိပါက မိသားစုဝင်များထံသို့ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးနိုင်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
မဲခေါငျမွဈဝှမျးဒသေအနီး အံ့ဩစရာကောငျးတဲ့ ဧရာမကြောကျဆောငျမွှနေဂါးခေါငျးပွတျ ကိုယျခန်ဓာသဏ်ဍနျကွီး လြှိုကမျးပါးယံတဈခုကို တှရှေိ့
[Zawgyi] မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသအနီး အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ ဧရာမကျောက်ဆောင်မြွေနဂါးခေါင်းပြတ် ကိုယ်ခန္ဓာသဏ္ဍန်ကြီး လျှိုကမ်းပါးယံတစ်ခုကို တွေ့ရှိ ကမ္ဘာ့နေရာဒေသများများတွင်လူသားတို့လေ့လာစူစမ်းရှာဖွေလို့မကုန်နိုင်တဲ့ လျှို့ဝက်ဆန်းကျယ်မှုတွေနဲ့အတူ မယုံနိုင်စရာ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်အဖြစ်အပျက်များစွာကလည်း သဘာဝတရားကြီးနဲ့ပေါင်းစပ်ကာ လူသူမရောက်နိုင်ကြတဲ့ စိမ့်ကြီးဂနိုင်တောမြိုင်ထဲကြီးထဲမှာ မြင်ရသူများအဘို့မှင်သက်မိရလောက်အောင် အသက်ဝင်လွန်းလှသော အရာတွေက တစ်ကယ့်ကိုရှိနေတယ်ဆိုတာ မယုံနိုင်စရာပါဘဲ ။ Advertisements ကီလိုမီတာပေါင်း ၄၈၀၀ ခန့်ရှည်လျားတဲ့ (၆)နိုင်ငံကို ရစ်ပတ်စီးဆင်းခွေလျှက်ရှိနေတဲ့ မယ်ခေါင်မြစ်ကြီးကိုထက်ပိုင်းခြမ်းပြီးပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ထိုင်း
ခြောငျးဆိုးပနျးနာရငျကပျြပြောကျဆေးနညျးလေးပါရှငျ့ ။ကှမျးရှကျ ၊ဆေးပငျစိမျး ၊ဇီယာရှကျ ပငျစိမျးနကျ အရှကျငါးရှကျစီမီးကငျပါ။ပီးရငျဆားနဲ့နဲ့ထဲ့ပါအရညျညဈပီးတဈနသေုံ့းကွိမျသောကျပါ Advertisements လကျတှပြေ့ောကျပါသညျ။ ############################################### ချောင်းဆိုးပန်းနာရင်ကျပ်ပျောက်ဆေးနည်းလေးပါရှင့် ။ကွမ်းရွက် ၊ဆေးပင်စိမ်း ၊ဇီယာရွက် Advertisements ပင်စိမ်းနက် အရွက်ငါးရွက်စီမီးကင်ပါ။ပီးရင်ဆားနဲ့နဲ့ထဲ့ပါအရည်ညစ်ပီးတစ်နေ့သုံးကြိမ်သောက်ပါ Advertisements လက်တွေ့ပျောက်ပါသည်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကအပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ… မိသားစုအတွက်အများကြီး ဒုက္ခခံစွန့်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးမီးစာကုန်ရေခမ်းတဲ့ အချိန်လေးပေါ့… သားနှစ်ယောက်မွေးထားခဲ့တယ်….ဇနီးသည်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး အသက်အရွယ်အိုမင်းမစွမ်း ဖခင်ကြီးဟာ….လေဖြတ်ပြီး ကိုယ်မှာအရေပြားရောဂါ စွဲကပ်ခဲ့တယ်…. တစ်နေ့အိမ်မှာသား တစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲဖြစ်တော့ ဖခင်လူမမာကြီးကို ပွဲထုတ်ရမှာရှက်လို့ဆိုပြီး… အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ချောင်ပိတ်ပြီးသော့ခတ် ထားကြတယ်…. Advertisements အလုပ်သမားကို စောင့်ကြည့်ဖို့တာဝန်ပေးပြီး သော့ကိုပါအပ်ခဲ့တယ်…မင်္ဂလာပွဲပြီးတော့ ဟန်းနီးမွန်းခရီးနှစ်လ၊သုံးလထွက်မယ်ဆိုပြီး ဖခင်ကိုအလုပ်သမား လက်ထဲမှာ စွန့်ပစ်ခဲ့တယ်….